९ महिनादेखि बन्द रहेको, सवारी लाइसेन्स खुलाउँने बारेमा सरकारले नि’काल्यो यस्तो जरुरी सूचना ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/९ महिनादेखि बन्द रहेको, सवारी लाइसेन्स खुलाउँने बारेमा सरकारले नि’काल्यो यस्तो जरुरी सूचना !
काठमाडौँ / सरकारले विगत ९ महिनादेखि बन्द रहेको विभिन्न किसिमका सवारी साधनको चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को परीक्षा प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी गरेको छ ।गत ११ चैत २०७६ देखि सरकारले को’रोना भा’इरस रोकथाम तथा नि’यन्त्रणका लागि ल’कडाउन गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सको लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित गरेको थियो । त्यसयता सरकारी कार्यालय खुलेर सेवा सुचारु भए पनि सवारी लाइसेन्सको परीक्षा भने खुलेको छैन ।
यातायात व्यवस्था कार्यालयले गत असारदेखि नै कार्यालय खुला गरेर सवारी दर्ता र नवीकरणको सेवा भने दिँदै आएको छ । यसरी लामो समयसम्म लाइसेन्स नखुल्दा सेवाग्राही मर्कामा पर्दै आएका छन् । सामान्य अवस्थामै लाइसेन्सका लागि भी’डभाड हुने गरेकामा नौ महिनासम्म स्थगित हुँदा अब झ’नै चा’प बढ्ने भएको छ ।
विभागले भने को’रोनाको जो’खिम अझै न’हटेको भन्दै को’टा तोकेर आवेदन खोल्ने तयारी गरिरहेकोे छ । लिखित र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षाका लागि सामान्य अवस्थामा लिइरहेकोभन्दा करिब आधा मात्रै को’टा तोकेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारीमा विभागको रहेको छ । भी’डभाडका कारण को’रोना सं’क्रमणको जो’खिम हुने भन्दै कोटा तोक्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागले सबै कार्यालयलाई परीक्षा सञ्चालनका लागि तयार रहन पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । को’रोना सं’क्रमणको सुरक्षाका लागि पी’पीई, फे’ससिल्ड, मा’स्क, से’निटाइजर आदिको व्यवस्थासहित तयार रहन विभागले भनेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा भक्तपुरको जागती, काठमाडौंको ठू’लो भ’-याङ, सुकेधारा र ललितपुरको एकान्तकुना गरी चारवटा कार्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरिन्छ । याे खबर राजधानी दैनिकमा छ ।